RW Cumar oo maanta la kulmay Madaxda Dekedda Muqdisho – Radio Daljir
Maajo 24, 2015 2:00 g 0
Axad, May 24, 2015 (Daljir) — Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali ayaa maanta kormeer ku tagay Dekedda weyn ee Muqdisho, Kormeerkan ayay ujeedkiisu ahayd inuu u kuur-galo howlaha ka socda dekedda. wuxuuna indha-indheeyn ku sameeyey qaybo ka mid ah Dekedda oo ay shaqooyin ka socdeen.
Kormeerka kaddib ayaa ra\_’\_’iisul wasaaruhu wuxuu kulan la qaatay maareeyaha Dakedda Muqdisho iyo masuuliyiinta shirkadda Al-beyrak ee Dalka Turkigo oo gacanta ku haya maamulka Dakedda.
Maareeyaha Dekedda Muqdisho, C/llaahi Cali Nuur ayaa kulanka kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta, isagoo u Faahfaahiyay Waxyaabaha ay sida gaarka ah uga Wadahadleen RW Sharma’arke.
“Waxaa maanta booqasho noogu yimid, Ra’iisul Wasaare Cumar, taasoo ka mid ah howl-maalmeedka dowladda, gaar ahaan meelaha ugu muhiimsan sida garoonka diyaaradaha iyo Dakedda. Waxaana Ra’iisul Wasaaraha warbixinno ka siinnay sida ay howlaha dekeddu u socdaan, waxaana tusnay waxyaabihii qamsoomay Toddobadii bilood ee la soo dhaafay,” ayuu yiri maareeyaha Dakedda Muqdisho.
Sidoo kale, Maareeyaha Dakedda Muqdisho ayaa Xusay in Horumar la Taaban karo uu ka jiro Dakedda sida; qalabka lagu qabto howlaha Dakedda iyo qaabka Howl-galka oo noqday mid la mid ah Dekadaha waaweyn ee Caalamka.
“Waxaa Dekedda ka muuqda is-bedel la taaban karo, burburkii wadanka ka dhacay ayaana dekedda saameeyay, laakiin hadda Awood ay kula Tartami karto Dekedaha Caalamka ayay leedahay. Maraakiibta oo toddobaadyo taagnaan jirtay hadda 48-saacadood gudahood ayaa rarka looga dajiyaa, waa nidaamka dekedaha caalamka oo kale, runtiina waa horumar weyn oo uu dalka gaaray,” ayuu C/llaahi Cali Nuur ku daray hadalkiisa.
Ugu dambeyn, Dekedda Muqdisho waxaa gacanta ku haysa shirkadda Al-beyrak oo laga leeyahay dalka Turkiga, waxaana weli ka socda dhismayaal waa weyn oo loogu talo-galay in lagu ballaariyo, si ay u qaaddo miisaanka baaxadda leh ee dhinacyada ganacsiga iyo alaabada kale ee la keenno Somalia, waana mid ka mid ah ilaha ugu waa weyn dhaqaalaha dalka.
Somaliland oo Joojisay Qaabilaadda Qaxootiga ka imaanaya Yemen